Vaovao - Tombontsoa ho an'ny milina fantson-drano vy
Ny tombony azo avy amin'ny milina fantson-drano vy
Ny milina fanaovana fantsom-by dia ampiasaina matetika amin'ny fizotran'ny fantsom-by vy sy karbaona toy ny boribory, toradroa, misy profil ary fantsona mitambatra, izay novokarina tamin'ny alàlan'ny fanodinana, fananganana, fantsom-panafody argon, fitotoana vy, fanitsiana , fanapahana ary fomba hafa.
Fitaovana fantsom-boaloboka: ny milina fantsom-by tsy misy vy no fitaovana lehibe indrindra amin'ny tsipika famokarana fantsom-by, ny safidiny dia ny ahiahin'ireo mpampiasa vola foana. Ahoana ny fomba hisafidianana milina fantsom-by tsy misy fangarony? Araho ny tombony azo, tsy maintsy ho marina izany.
1. Famokarana mandeha ho azy: amin'izao vanim-potoana ihavian'ny tsy fahampian'ny mpiasa izao, ny milina fantsom-by fantsom-by, famokarana mandeha ho azy, ho an'ireo mpamokatra hamonjy ampahany betsaka amin'ny vidin'ny asa, manala ny ampahany amin'ny tsindry amin'ny fampiofanana talenta.
2. Fahamarinana: arakaraka ny maha tsara kokoa ny fitoniana amin'ny milina fantsom-by vy, ny matanjaka sy mateza kokoa. Ny fahamendrehana dia voafaritry ny fitaovana, ary ny fitaovana avo lenta hamokarana fitaovana tsy dia tsara kalitao. Ny milina fantsom-by fantsom-by dia manaraka ny kalitaon'ny fitaovana, manaova vokatra kalitao, tompon'andraikitra amin'ny mpanjifa ho andraikitr'izy ireo manokana, ny mpanjifa aloha, mba hamoronana toe-javatra mandresy.
3. Fahombiazana avo: fahombiazana avo dia iray amin'ireo tombony amin'ny famokarana milina fantsom-by vy. Saingy ny fiheverana an'ity tombony ity dia ny kalitaon'ny milina sy ny bobongolo azo antoka, mampihena ny toe-javatra misy ny fikojakojana sy ny fanamboarana, ary avy eo hihatsara voajanahary ny fahombiazan'ny famokarana.
Zava-dehibe amin'ny kalitao ny kalitao; mamaritra ny tahan'ny vokatra vita. Ny kalitaon'ny milina fanaovana fantsom-by tsy misy fangarony dia mifandraika amin'ny tsipika famokarana eo amin'ny tsipika famokarana, safidio tsara! Ny serivisy feno dia afaka manampy anao amin'ny famahana olana maro amin'ny famokarana ary hampandeha tsara kokoa ny fampiasam-bola. Amin'ny maha manam-pahaizana anao amin'ny indostria, lazao anay ny olanao, avelao izahay hamaha ny olana ary hanome serivisy mahafa-po anao.